गगन थापालाई गाउँले द्वारा प्रतीकार अनी गाऊ निकाला
Gorikopoi 2359 days ago
giordano 2359 days ago
instagram 2359 days ago
ashishme 2358 days ago
Gorikopoi 2358 days ago
Tmobile 2358 days ago
texasranger 2358 days ago
magorkhe1 2358 days ago
Visitor from US is reading asylum case texas
Posted on 05-27-13 10:50 PM Reply [Subscribe]
karyakram ma pani upastiti bhayeko thiye, amshava rakhiyeko thiyo rukum ma, muskil le 30 jana sahabhagi thiye, gagan le gali garna thalyo maobadi lai, sayau sthaniya haru, gagan biruddha nara lagaudai k ayeka thiye gagan tap, khyal gara gagan, mao lai gali garne rahar chha bhane ktm bata gara, media le sthan dinechha, kantipur le thula letter le lekhnechha, aringal ko golama gayera, jatha bhavi hirkauna thale pachhi k hunchha, gagan lai jati arulai k thaha
Posted on 05-27-13 11:15 PM [Snapshot: 25] Reply [Subscribe]
Haha dude u r funny as hell, kat kat tyo thapakaji lai, chor thug thapa haru lai katau desh bachauu
Posted on 05-27-13 11:33 PM [Snapshot: 77] Reply [Subscribe]
nadhati bhan ta ta tibetan ki bhutanese refugee ho? u always have problem with nepalese people and nepal itself.....
Posted on 05-28-13 12:07 AM [Snapshot: 121] Reply [Subscribe]
अशिमे त माओबादी को कुकुर नै भयो । यो गोरी को पोई अब जातियेता मा नि जान थाल्यो??
dude its not funny at all
असिमे तलाई लाज भनेको के हो थाहा छ??
Posted on 05-28-13 12:27 AM [Snapshot: 149] Reply [Subscribe]
ओई त छेत्रीहरु बाहुनको शरीरको मैलाबाट जन्मेको होइन ? साला लाज त तलाई पो लागनु पर्ने हो ..... हे हेहे हेहेहे
Posted on 05-28-13 12:41 AM [Snapshot: 152] Reply [Subscribe]
Haha i agree with ashisme, mero paisa sapati liyera firta nadine haru bahun chetri ho, line belama liyo maile pani bichara Nepali bhanera diye aile dina ta jugau lagaula jasto cha, yini haru ko tauko katepachi matra mero paisa ko hisab barabar hola jasto cha. Malai bhutanee refugee re haha na ma tibetan nai hoon, malai bhutani ra tibetan pani man pardaina, samgra ma bhanda malai gora bahek koi man pardaina in this world, ma unique Nepali, Nepali man naparaune Nepali hoon, koi koi hunchan ni gora bhayera gora man naparaune, kale bhayera kale nan naparaune, ho testai ma aafu Nepali bhayera Nepali nai man pardaina, ek dum khate chor beggar discipline nabhako jantu haru jasto lagcha malai afnai nepali haru. Peace.
Last edited: 28-May-13 12:46 AM
Posted on 05-28-13 8:25 AM [Snapshot: 437] Reply [Subscribe]
काठमाडौं, १४ जेठ । पार्टी सुदृढीकरण अभियानअन्तर्गत जेठ ६ को साँझ रुकुमको सदरमुकाम मुसिकोट पुगेँ । कांग्रेसले कार्यक्रम गर्न नसकेका कतै १६ त कतै १८ वर्ष भइसकेका गाउँहरूमा पुगियो । त्यहाँको आश्चर्यजनक सहभागिता उत्साहजनक थियो
भाषण सुनेपछि त्यही मञ्चमा प्रवेशको लहर चल्थ्यो, प्रायः सबै गाउँमा । प्रवेश गर्नेमा एकाध स्वतन्त्रबाहेक सबै एमाओवादी समर्थक थिए । म थुप्रै गाउँ जाने गरेको छु । द्वन्द्वको समयमा प्रायः गाउँमा दुवैको क्षति भएको पाइन्छ । रुकुमले मलाई यसपाला भावविह्वल बनायो । माओवादी ‘जनयुद्ध’ सुरु हुनुअघि २०५१ मा गणेश शाह मारिएका थिए । त्यसअघि पार्टी प्रवेशका लागि दबाब दिन एक जना हाम्रा समर्थक दलित कार्यकर्ताको खुट्टा काटिएको थियो । यो कार्यक्रममा आउने कसैको एउटा हात छैन, कसैको खुट्टा छैन । कसैले श्रीमान्, कसैले श्रीमती गुमाएको कार्यकर्ता हामीसँग थिए । केही न केही नगुमाएका कार्यकर्ता विरलै थिए । तीन महिनाअघि टुली गाविसका पार्टी सभापति कविराम खत्री मारिएको घटनाले द्वन्द्व सुरु हुनु अघिदेखिको आतंक अझै जारी रहेको देखाउँछ । त्यसो त, रुकुममा द्वन्द्वका बेला माओवादीले पनि धेरै क्षति बेहोरेको छ । अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा रुकुममा कांग्रेसलाई अवरोध गरिएको थियो ।
यसपाला गरैला बेलटापुमा अन्तिम कार्यक्रम थियो । त्यसमा उल्लेख्य रूपमै एमाओवादी कार्यकर्ता, समर्थक, लडाकु, वाईसीएल कांगेस प्रवेश गर्ने सूचना रहेछ । त्यही भएर कार्यक्रमको एक दिनअघि नै वाईसीएलले त्यही ठाउँमा मार्चपास गरे । संविधान विरोधीलाई प्रवेश गर्न नदिने भन्दै मार्चपासको सूचना स्थानीय रेडियोमा आइरह्यो । जिल्ला नेताहरू पनि त्यही सक्रिय भए । त्यसैले होला, अघिल्लो कार्यक्रममा नभए पनि त्यहाँ इन्स्पेक्टरको कमान्डमा सुरक्षा थियो । सभा पनि अत्यन्त ठूलो भयो, यसअघिका सबै जोडेजति । मान्छे रोएका छन्, थप्पडी बजाएका छन् । पीडा र उत्साह दुवै देखिन्थ्यो । कार्यक्रमस्थल नजिक चौतारीमा माओवादीका कार्यकर्ता बसेका थिए । हाम्रो जुलुस आयो । साथीहरू बोले । अलिअलि हुटिङ भयो । कालो झन्डा वा सानातिना विरोध स्वाभाविक थियो । मेरो पालो आयो । १ घन्टा १० मिनेट बोलेँ । त्यसपछि सुरु भयो पार्टी प्रवेश । उद्घोषकले नाम पढ्दै थिए । म माला लगाउँदै स्वागत गर्न थालेँ । १०/१२ जनाको नाम भनेपछि एकजनाले गेटको झन्डा तानेर घिसार्दै लग्यो । हाम्रा कार्यकर्ताले झन्डा खोसे । त्यसपछि उनीहरू एक्कासि ढुंगा हान्न थाले । त्यतिबेला माओवादी समर्थकको ठूलो संख्या डाँडामा चढिसकेको रहेछ । एकैपल्ट माथिबाट ढुंगा बर्साउन थालियो । भागाभाग मच्चियो ।
उनीहरू केही अघि बढ्न खोज्दा हाम्रा साथीहरूले प्रतिरोध मात्र गरे । तर अचम्मको कुरा फिल्डका प्रहरी मूकदर्शक भयो । नहान्नुस् भन्नेमात्र भयो । लाठी लिएर बस्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नुपर्ने होइन ? प्रहरीको डर नै भएन उनीहरूलाई । कार्यकर्तालाई संयमित हुन भन्यौं । थप घटना हुन दिएनौं । संयमित भएर फर्कदै थियौं । केही अगाडि पुगेपछि प्रहरीले असुरक्षित हुन्छ भन्दै मलाई गाडीमा बस्न आग्रह गरे । अतिरिक्त सुरक्षा मागेका थिएनौं । ढुंगा हान्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपथ्र्यो । त्यो नगर्ने प्रहरीको विश्वास भएन । त्यसैले जान मानेनौं । हामी पर पुगेर आफ्नै गाडी चढ्यौं । हासिवाङ भन्ने ठाउँमा पुगेपछि डाँडामाथिबाट गाडीमा ढुंगा प्रहार भयो । भाग्यवश छतमा बस्ने ७/८ जनामध्ये कसैलाई लागेन । उहाँहरू हाम फालेर गाडी चढे । चालकले जोडले गाडी हुँइक्याएकाले हामी जोगियौं । संगठित हिंसा प्रयोग गर्दै आएको एमाओवादीले अझै त्यो छोडेको छैन भन्ने यसले देखाउँछ । अस्ति भर्खर प्रचण्डले सल्यानको बफुखोला भन्ने ठाउँमा प्रशिक्षण दिएका थिए, जुन नजिकै पर्छ त्यहाँबाट । म गएको बसैलाई थाहा छ । त्यसैले अकस्मात भएको घटना होइन यो, योजनाबद्ध थियो । भोलिका दिनमा आफ्नो ठाउँका प्रतिस्पर्धी दलहरूसँग यसैगरी व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रशिक्षण दिएको संकेत यसले गर्दैन ? अर्को कुरा, दुई तिहाइ बहुमत आउने दाबी छ एमाओवादीको । पहिला राप्ती पूरै जितेको हो । जनआधार त्यस्तै हो भने मैले गएर १० वटै आमसभा गरे पनि, ५ सय कार्यकर्ता कांगे्रस प्रवेश गरे पनि किन डराउनु ? रोक्नुपर्ने थिएन । यो अत्ताल्लिएको र हतोत्साही भएको उदाहरण पनि हो । रुकुममा कांग्रेस भएर वा माओवादीको समर्थक नभएर पनि बाँच्न पाउने, बोल्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
युद्धको कालमा त हनन भयो भयो, तर अहिले पनि यसलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन । तर यो सबका बीच पनि म उत्साही छु । यहाँ माओवादी छ, धेरै योद्धा उत्पादन गर्‍यो भनेर पनि हेरियो । लोकतन्त्रवादी भएबापत मान्छेले त्यतिबेला गुमाउनु पथ्र्यो । काठमाडौंमा के गुमेको छ र ? तैपनि हजारौंको संख्यामा मान्छे कांग्रेस भएर बसिरहेका छन् । स्वतन्त्रताप्रति आस्था छ । कांग्रेस भएर न पेन्सन पाउँछ, न तक्मा पाउँछ, बरु कांग्रेस भएबापत जीवन, सम्पत्ति वा केही न केही गुमाउनुपर्छ अझै पनि त्यहाँ । विपन्न छन् । त्यस्तो सन्त्रासमा पनि अडिग भएर बस्नुको एकमात्र कारण लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र भरोसा नै हो । मेरो प्रेरणा यही हो । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा यो घटनाले निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । यो एमाओवादीले कांग्रेसको कार्यक्रम बिथोलेको मात्र होइन । म ढुंगा बोकेर लड्न गएको थिइनँ ।
हरेक नागरिकलाई शान्तिपूर्वक देशको हरेक कुनामा पुग्ने अधिकार छ । सवाल कांग्रेसको मात्र होइन, त्यसैले यो आक्रमण गलत थियो, आपराधिक थियो र असंवैधानिक थियो भनेर हरेक लोकतन्त्रवादीले आवाज उठाउनुपर्छ । मसँग जो पनि असहमत हुन सक्छ, तर असहमतिको जवाफ त्यस्तो होइन । त्यसैले यो अपराध थियो, झडप होइन
Posted on 05-28-13 2:44 PM [Snapshot: 792] Reply [Subscribe]
[Disallowed String for - use not allowed] khate haru... ashishme ra gori ko poi ta prachande ko dhal futera janmeka
you just makingajoke out of yourselves
kun chahi maobadi radi ko choro ko santaan haru ho yiniharu
..blood money le US ma padhdaihola macheekne haru
janu ni maoist country china tira.. kina US ma ako khate haru
Posted on 05-28-13 4:03 PM [Snapshot: 875] Reply [Subscribe]
सिधै भने भै हाल्यो नि हामि माओबादि गाउले बनेर नेपालि कांग्रेसको नेतालाई लखेत्यौ : के को जनता हुनु त्यो सबै माओबादि हुन् : नौटंकी धामी पनि आफुनै बोक्सी पनि आफै |
Posted on 05-28-13 9:58 PM [Snapshot: 1061] Reply [Subscribe]
Posted on 05-28-13 11:02 PM [Snapshot: 1120] Reply [Subscribe]
wow, I would compare Gorikopoi toalizard that changes its color as weather changes. I have been reading his posts for the last few months in sajha and I can tell that anyone can smell ofaracism on him. Comon man, come out of the box, then you will see the difference. And Ashishme is compared toaislamist extremist. Islamist extremists are brainwashed by suchareligious cult who sees only their say is right, so the Maoists like Ashishme. What's wrong with you guys, you don't want to see with your own brain and sense? You always have to think with the eyes of Maoism and Prachandapath?